के तपाइलाई थाहा छ– कम्प्युटर ‘किबोर्ड’ का अक्षर किन हुँदैनन् क्रमानुसार? - Everest Dainik - News from Nepal
के तपाइलाई थाहा छ– कम्प्युटर ‘किबोर्ड’ का अक्षर किन हुँदैनन् क्रमानुसार?
काठमाडौं, कम्प्यूटरको आविस्कार १९ औं शताब्दीमा चाल्र्स बेबेज नामक एकजना प्रख्यात गणितका प्रोफेसरले गरेका थिए । त्यसैले उनलाई कम्प्युटरको पिता पनि भनिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस आउने भयो पट्याउन मिल्ने ल्यापटप
याे पनि पढ्नुस घण्टौंसम्म कम्प्युटर अगाडि बस्नेहरुका लागि यी टिप्सहरु उपयोगी
ट्याग्स: computer, Keyboard